I-BEULINES I-Mesotherapy Anti-Melano Solution Serum Izinto ezisebenzayo ze-BEULINES Isisombululo se-Anti-Melano Mesotherapy, indibaniselwano enamandla kunye nesityebi yokulwa ne-oxidant, kucetyiswa ngokukodwa ukunciphisa iingxaki zolusu ezinje nge-hyperpigmentation kunye neendawo zobudala, i-melasma, amabala amnyama ulusu. Iyakuthintela ukuguga kweefoto, iphucula amabala amabala kwaye inike ulusu imbonakalo yolutsha. Esona sithako: I-Aqua (Amanzi), iTranxamic Acid, iNicotinamide Mononucleotide, iAcetyl Glucosamine, iAccorbic Acid, iPhenoxyethanol, ...
Yintoni i-Botulinum Toxin? Ityhefu yeBotulinum, yiprotein ye-neurotoxic eveliswe yintsholongwane iClostridium botulinum. Iyanciphisa ukubola kwemisipha ngokuthintela ukukhutshwa kwe-acetylcholine kwindibaniselwano ye-neuromuscular, ukufezekisa injongo yobuhle kunye nokubumba komzimba. Yintoni enokwenziwa yiBotulinum Toxin? Ityhefu yeBotulinum isetyenziswa kwiindawo ezininzi zonyango, ezinjengokususa imibimbi ebusweni, ukumila kobuso ebusweni, ukubumba imilenze kunye negxalaba nentamo, iintsini ezibonakalisiweyo, njl. Ukuphathwa nokugcinwa ...
Yintoni i-BEULINES mesotherapy whitening solution? I-BEULINES Isisombululo se-mesotherapy esimhlophe sisebenzisa i-arhente yokukhanyisa ulusu eyaziwa ngokuba yi "Glutathione". Injongo yokusebenzisa i-glutathione kukuguqula i-eumelanin ibe yi-pheomelanin, ehlala ifumaneka kubantu abanesikhumba esifanelekileyo. IGlutathione ikwanceda ekunqandeni ukuveliswa kwee-enzymes ezaziwa ngokuba yi-tyrosinase ekwathatha inxaxheba kwimveliso ye-melanin emzimbeni wakho engakulungelanga impilo yesikhumba sakho. Ngamanye amagama, iGlutathione Injecti ...
Yintoni ityhefu yeBotulinum? Ityhefu yeBotulinum yiprotein ye-neurotoxin enamandla evela kwiClostridium botulinum bacterium.it ingene kwimibimbi ngesirinji, enokuthi ithintele ukukhutshwa kwe-acetylcholine kwi-membrane ye-preynaptic ye-peripheral motor nerve endings kunye nokuthintela ukuhanjiswa kolwazi phakathi kwemithambo kunye nezihlunu. , ukufezekisa injongo yobuhle kunye nokubumba komzimba. Ityhefu yeBotulinum ihlala isetyenziselwa i-jawline, imilenze, igxalaba, intamo encinci, ukuncuma kwe-gummy, i-removi ...
Yintoni i IINKWENKWEZI Unyango lweMesotherapy Ukukhula kweenwele Isisombululo?
I-BEULINES I-Mesotherapy Isisombululo sokukhula kweenwele yinkqubo encinci yokuthambisa, kwaye yaziwa njengeyona ndlela intsha yokuhlaziya iinwele. Unyango lweMesotherapy lubandakanya ukucoca ngobunono entloko, emva koko kutofwe amayeza amancinci amayeza amancinci ngaphantsi kwentloko. Izinto zokukhula zibangela imetabolism yeseli, ukukhawulezisa ukuvuselelwa kweefollic zeenwele kunye nokuvuselela ukukhula kweenwele. Kufunyenwe kuluncedo kwizigulana ezininzi ezinengxaki yokuwa kweenwele ezinkulu.
Yintoni i-BEULINES Mesotherapy Isisombululo esichasene nokwaluphala? I-BEULINES Ukunyanga okuguga kwe-Mesotherapy kubandakanya ukufaka inaliti ye-Hyaluronic Acid ngqo kulusu oluphakathi olubizwa ngokuba yi-mesoderm ngesirinji, iinaliti ezincinci, i-meso gun. Oku kuyondla kwaye kuhlaziye ulusu ngokukhuthaza ukuveliswa kwe-collagen kunye ne-elastin kwaye kuvuselele imetabolism yesikhumba sakho. I-BEULINES Mesotherapy yinkqubo esebenza ngaphakathi ngaphakathi, ekuphuculeni inkangeleko kunye nomgangatho wolusu. Eyona nto ibalulekileyo: Aq ...
Yintoni i-BEULINES iMesotherapy Fat yokuNciphisa isisombululo? I-BEULINES I-Mesotherapy Fat yehlisa isisombululo sonyango olusebenzayo, olunganyanga olusetyenziselwa ukuphucula i-cellulite.Ibizwa ngokuba yi-mesotherapy kuba umxube wee-enzymes zokunyibilikisa amafutha uhanjiswa kwi-mesoderma okt amanqatha kunye nezicwili ezihlangeneyo ezilele phantsi komphezulu wolusu. I-cellulite mesotherapy yindlela efanelekileyo, ephumelelayo esetyenziselwa ukususa i-cellulite engaphezulu kwesikhumba.Ii-enzyme eziphambili ze-cellulite mesotherapy ziCarnitine ...